Antsirabe Nahazo ivontoerana informatika ho an�ny jamba
Fanadinam-panjakana 2018 Nahemotra avokoa
Hahemotra roa herinandro taorian’ny daty efa notondroin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena avokoa ny fanadinam-panjakana eo ambany fiadidian’izy ireo amin’ity taona 2018 ity.
Fifandonana teny Ankatso Polisy iray naratra mafy
Ny hisavorovoroan-kilatoana marina ve sa dia efa lasa fomba amam-panao isan-taona ny grevy eny amin’ny oniversitem-panjakana eto Madagasikara vao mivoaka ny vatsim-pianarana ?
CNTEMAD Hanomboka hampiasa ny « Logiciel ENT »
Hanomboka hampiasa ilay logiciel ENT « Environnement Numérique de travail » amin’izay amin’ity taona 2018 ity ny oniversitem-panjakana CNTEMAD manerana ny Nosy,
Mpianatry ny oniversiten’Ankatso Hanomboka anio ny grevy …
Tezitra sy diso fanantenana amin’ny fanjakana ny mpianatry ny anjerimanontolon’Antananarivo ankehitriny.
Fanemorana ny fidiran’ny mpianatra Miteraka olana ny fahataran’ny serasera
Taorian’ny fialan-tsasatry ny pesta dia miditra amin’ny fialan-tsasatry ny rivodoza indray ireo mpianatra ao anatin’ny fari-piadidiam-pampianarana maro nanomboka omaly toy ny eto Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano ary Brickaville.
Oniversiten’Antananarivo Ataon’ny fanjakana takalonaina ny mpianatra
Feno ny kapoakan’ny SECES na ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo noho ny bemarenina sy ny fandrirarirana ataon’ny fanjakana.
Foana ny diplaoma "Maitrise" Velon-taraina ny mpianatra toekarena
« Manao antso avo amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny izahay amin'ny olana misy aty aminay, indrindra ny ao amin'ny sampana toekarena », hoy ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra Rafaliherisoa Safidy Obien, omaly.
Notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly zoma 5 mey 2017 tany Antsirabe ny ivontoerana ara Informatika natokana hiofanan'ny olona manana fahajambana ka ny tetikasa Voatra Asa eny Ivory no nametrahana azy.
Tetikasa hiarahan'ny Ong CBM sy ny fivodronamben'ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana no mitantana sy nahazoana ny tetikasa. Nambaran-dRtoa Lila Ratsifandrihamanana, tompon'andraikitry ny Ong CBM eto Madagasikara fa tsy vao sambany akory no nanohanan'izy ireo ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana teto Madagasikara nandritra ny 36 taona niasan'izy ireo teto fa efa maro ny tetikasa notanterahina nanerana ny nosy. Solosaina niisa 10 no natolotra sy ampiofanana ireo jamba ao Antsirabe ka olona 10 isan'andro no hianatra ao, izay hiofana mandritra ny 6 herinadro raha ny nambaran'Atoa Hoby Ratobimiarana, mpandrindra ny tetikasa Voatra Asa Antsirabe. Tanjona ho azy ireo ny hanofana jamba hatrany amin'ny 70 ho afaka hiasa amina sehatra maro aorian'ny fahavitan'ny fiofanana ataony. Tanjona ho azy ireo hatrany moa ny tsy ho vesatra eo amin'ny fiarahamonina.